एजेन्सी। पुरुष यौनाङ्गको आकार कत्रो हुनुपर्छ ? सेक्समा सन्तुष्टिका लागि लिंगको पर्फेक्ट साइज कति होला ? यस्ता प्रश्नहरुको प्रायः सबै मानिसहरुको दिमागमा खेल्ने गर्छ ।
अब यो प्रश्न मात्र रहेन । यसको जवाफ पनि मिलेको छ । वैज्ञानिकहरुले सेक्समा सन्तुष्टिका लागि लिंगको औसत आकारका बारेमा नयाँ तथ्य अगाडि ल्याएका छन् ।
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया र युनिभर्सिटी आफ न्यू मेक्सिकोका वैज्ञानिकहरुको एउटा समूहले हालसालै एक अनुसन्धान गरेका थिए । यस अनुसन्धानमा उनीहरुले १८ देखि ६५ वर्षका ७५ महिलाहरुलाई सहभागी गराएका थिए । र उनीहरुको अगाडि लिंगको ३३ थ्रि-डी मोडेल राखेका थिए । यी सबै मोडेल अलग अलग आकारका थिए ।
उक्त अनुसन्धानमा जुन परिणाम आयो, त्यसले वैज्ञानिकहरुलाई अचम्भित भए । परिणामका अनुसार सेक्समा सन्तुष्टिका लागि धेरै महिलाले लिंगको आकार ६.३ इञ्च लाई रोजे र यसैको आधारमा वैज्ञानिकहरुले ६.३ इञ्चलाई सबैभन्दा राम्रो आकार माने ।
तपाईं डराउनु भएको त छैन ? कतै आफ्नै लिंगको आकारबारे कल्पना त गर्न थाल्नु भएन ? डराउनु पर्दैन, संसारका पुरुषहरुको लिंगको औसत आकार केवल ५.२ इञ्च मात्र हुन्छ ।
यद्यपि, परिस्थितिको दृष्टिले लिंगको आकार हरेक महिलालाई फरक पार्छ । अनुसन्धानका अनुसार, फरक फरक माग हुन्छ । रिसर्चका मुताबिक, आकस्मिक सेक्सको क्रममा महिलाहरुका लागि लिंगको आकारको महत्व हुन्छ । जबकि हुक-अप्स पोजिसनका लागि महिलाको लागि ६.४ इञ्चको साइज बढी रोज्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।